TÜBİTAK 9 Handray mpiasa maharitra hatrany | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYJobsTÜBİTAK dia handray mpiasa maharitra mitohy 9
06 / 05 / 2020 Jobs, ANKAPOBENY
Tubitak dia hitohy amin'ny asa ho an'ny mpiasa
TÜBİTAK maka mpiasa maharitra 9 hiasa ao Kocaeli. Misy fepetra manokana takiana amin'ny mpangataka. Ny fampiharana dia tsy maintsy atao ny 27 May 17.00:XNUMX amin'ny farany. Tsy ekena ny fampiharana, afa-tsy ny fangatahana apetraka amin'ny alàlan'ny "Rafitra Application Job".
NY FIVORIANA ENY DIA TOKO AINGA TAO ANY CANDIDATES
a) Voarara amin'ny zon'ny vahoaka.
b) Tsy mendrika ny handray anjara amin'ny resadresaka ao anatin'ny faritry ny fampandrenesana laharana TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-2 sy TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3.
c) Ny tsy fananana ny aretina na ny areti-mifindra mety hanakana azy tsy hanao ny adidiny tsy tapaka.
d) Ankoatry ny heloka bevava, ny heloka bevava nadika ho sazy hafa noho ny fanagadrana fotoana fohy sy ny fampiatoana antitra hafa ankoatra ny voatanisa etsy ambany; Na dia efa nigadra nandritra ny enim-bolana aza na famelan-keloka aza, ny heloka bevava toy ny fanodinkodinana, fanalabahana, kolikoly, halatra, halatra mahafaty, fanaovana hosoka, fisolokiana, fanararaotana ny fahatokisana, famoretana feno hosoka na fanaovana hosoka sy fahamendrehana, na dia efa nigadra enim-bolana aza aza. tsy voaheloka ho mpanao heloka bevava na fanaovana an-tsokosoko an-tsokosoko, fanendrikendrehana ireo tenda sy varotra ofisialy, mamoaka ny tsiambaratelon'ny asa, heloka amin'ny fanambaram-panjakana. Ny tsy fananana mpikambana, fampifandraisanaana na fifandraisana amin'ny firafitra, fananganana na vondrona ao anatin'ny ambaratongan'ny lalàna momba ny laharana faha-667 na ireo rafitra, fananganana na vondrona izay nanapa-kevitra ny Filankevitry ny Fiarovam-pirenena mihetsika manohitra ny filaminan'ny firenena.
e) Ireo mpilatsaka hofidina dia tsy maintsy manana mari-pahaizana mari-pahaizana diplaoma ambany indrindra amin'ny 4,00 amin'ny 2,50. (Amin'ny fiovam-po amin'ny salan'isa momba ny salan'isa amin'ny kandidà izay ny rafi-panabeazana ao amin'ny anjerimanontolo dia ao anatin'ny rafitra 100 mankany amin'ny rafitry ny 4, ny Dikan-tsofina momba ny sara amin'ny rafitry ny rafitra 4 ao amin'ny Rafitra 100 no ampiasaina).
a) Mba hangataka ny doka "www.bilgem.tubitak.gov.t dia”Mila misoratra anarana amin'ny rafi-pampianarana asa ianao. (Rehefa mamorona CV ho an'ny fangatahana, ny antontan-taratasy ilaina rehetra dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny rafitry ny eletronika ary tsy maintsy apetraka amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny kaonty fitadiavana azy io. Tsy ekena ny fampiharana afa-tsy ny fangatahana apetraka amin'ny alàlan'ny Rafitra fampiharana.
b) Ny fampiharana dia tsy maintsy apetraka tsy mihoatra ny 27 / 05 / 2020: 17: 00.
c) Ny fampiharana dia jerena amin'ny alàlan'ny kaody momba ny dokambarotra. Ireo mpifaninana dia ho afaka hampihatra amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny kaody famantarana avy amin'ny rafi-pampianarana asa. Tsy tokony hodinihina ireo fangatahana tsy misafidy kaody fitsanganana.
d) Raha ny voalazan'ilay lahatsoratra (e) amin'ny "Fepetra ankapobeny anaovana Kandida", in-10 im-betsaka ny isan'ny olona ho raisina manomboka amin'ny isa ambony indrindra no hiantsoana azy. Raha misy kandida hafa manana isa mitovy amin'ny kandidà farany dia asaina atao ny hanaovana fanadihadiana.
e) Ireo mpifaninana no hodinihina araka ny fanambarana napetrany tao amin'ny rafitry ny fangatahana asa nandritra ny fangatahan'izy ireo ary raha tsy marina ny fampidirana niditra tao na tsy misy ny antontan-taratasy manaraka dia hoheverina ho tsy manan-kery ny fangatahana.
CV ankehitriny (ny CV anao dia tokony hiomanana amin'ny sary, ao anatin'izany ny tiorka, ny kaody Tiorka sy ny laharana finday)
Degree na mari-pahaizana ho an'ny fivoahana.
YÖK Alumni Certificate (printy an-tserasera miaraka amin'ny e-governemanta sy ny kaody fanaraha-maso).
Antontan-taratasy momba ny serivisy miasa sy antontan-taratasy momba ny fiantohana amin'ny kandidà manana traikefa
Antontan-taratasy mampiseho ny toeran'ny miaramila.
Fanamarihana: Ny fivoarana sy ny fampandrenesana rehetra momba ny fizahana dia azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny Institution (www.bilgem.tubitak.gov.tr ​​/ http://www.tubitak.gov.tr) dia hambara.